XOG:- Xilliga iyo halka ay ka dhaceeyso doorashada xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Xilliga iyo halka ay ka dhaceeyso doorashada xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi
Warar hoose aynu heleyno ayaa sheegaya in doorashada xildhibaanada ka imaanaya deegaanada gobolada waqooyi ee ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee Soomaaliya lagu qaban doonno xarunta ciidamada AMISOM ee Xalane ee ku taalo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Doorashadaasi oo markii hore ahayd in lagu qabto xarunta gaadiidka ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in loo wareejiyay xarunta ciidamada AMISOM ee Xalane.
Sababta loo wareejiyay doorashadaasi ayaa lagu sheegay inay tahay, iyadoo laga cabsi qabo in dowladda Soomaaliya ay soo fara-geliso doorashada xubanaha labada Aqal ee gobolada waqooyi ka imaanaya.
Sarkaal ka tirsan guddiga doorashooyinka dalka ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay in doorashadaasi ay dhici doonto maalmaha soo socda ee isniinta ama talaadada, iyadoona ammaanka guud goobta ay ka dhaceeyso doorashadaasi suggi doonaan ciidanka AMISOM iyo kuwa nabad-sugidda Qaranka.
Dhinaca kale, war-saxaafadeed dhawaan kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu amaanay sida hufnaanta ah ee guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer gobol u maamulayaan doorashooyinka.
Waxaa maalmihii ugu dambeysay soo baxaayay eedeymo ku aadan in musuq-maasuq iyo wax isdaba marin baahsan lagu sameeyay doorashada xubnaha Aqalka hoose ee lagu soo doortay magaalooyinka maamul goboleedyada dalka.
Dhinaca kale, dalal badan oo si weyn u taageera Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay ka niyad jabeen hanaanka doorashada Soomaaliya, maadaama maalinba maalinta ka dambeeysa ay soo baxayaan dib u dhacyada ku imaanaya doorashada, waxaana ay sheegeen in dhowr jeer uu dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada Soomaaliya.